> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Audio in MP4 / MKV ka AAC in AC3
AAC waa codec caadi audio. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in MKV ama MP4 qaab weelka. Haddii aad qabto wax badan oo MKV ama MP4 files audio la AAC kuwan raadkaygay, waxaad iyaga ka ciyaari karaa badan ciyaartoyda warbaahinta. Si kastaba ha ahaatee, MKV ama MP4 files leh AAC audio ma laga yaabaa in aad si fiican u shaqeeyo xaaladaha qaar ka mid ah, si aad jeceshahay inaad ku beddelato AAC in AC3. Waxaa jira qalab si sahlan loo isticmaalo inay kaa caawiyaan inaad badalo track audio AAC in AC3 track audio iyadoo qaab video ama la beddelo qaab video ah. Waxa aan ka dhigi doonaa wax khasaaro tayada audio.
Taasi Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxaa inta badan loogu tala galay in loogu badalo video & audio files. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo audio ee file video ah (sida MKV, MP4 ama AVI) ka AAC in AC3, iyo sidoo kale AAC diinta files audio in AC3 files audio si fudud oo dhaqso. Hoos waxaa ku qoran, Waxaan idin ​​tusin doonaa talaabooyinka faahfaahsan.
1 Load videos files leh codec AAC ama AAC files audio
Marka hore, waxay helaan files videos ka kooban maqal ah kuwan raadkaygay AAC on your computer, ka dibna si toos ah jiidi files bartilmaameed ka computer si ay leeg- tahay diinta barnaamijkan ee. Si kale oo aad isticmaali karto si aad u dajiyaan video files waa in ay si fudud u riix badhanka uu furmo suuqa barnaamijka. Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan AAC audio files, si loo sameeyo waa isku mid.
2 Dooro sida goob wax soo saarka AC3
Wixii video files, kaliya aad u furi liiska hoos-hoos qaab ku saabsan "Qaabka Output" guddi, u tag "qaab"> "Video", ka dibna dooro MKV sida qaab wax soo saarka. Next, waxaad u baahan tahay riix "Settings" doorasho hoose oo ka mid ah "Qaabka Output" guddiga. Halkan, waxaad sameyn kartaa sida AC3 encoder maqal. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa channel.
Haddii aad soo dhoofsadaan AAC files audio in tallaabo 1, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan halkii "Qaabka"> "Audio"> "AC3" ee liiska hoos-hoos qaabka.
3 Beddelaan AAC in AC3
Markii wax walba la sameeyo, waxaad kaliya riix "Beddelaan" button ee geeska gacanta midigta hoose ee suuqa. AAC Tani weyn in Converter AC3 bilaaban doono diinta faylasha aad, iyo habka uu socon doono dhowr daqiiqo. Ka dib markii in, aad si fudud ku dhuftay karaa "Open Folder" ikhtiyaarka si aad u ogaato faylasha la jecel yahay.